यसरी थाहा पाउन सकिन्छ युवतीहरूको यौन चाहना » Khulla Sanchar
यसरी थाहा पाउन सकिन्छ युवतीहरूको यौन चाहना
यौन चाहनाको बिषयमा पुरुष र महिलामा पु्रुषको तुलनामा महिलालाई केहि बुझ्न कठिन हुन्छ । पुरुष र महिला एक अर्काका पुरक त हुन् तर श्रीमान श्रीमती नभइकन उनीहरु एक अर्काको पुरक हुन सक्छन् भन्न मिल्दैन । पुरुष र महिलामा पुरुषहरु छिटो बोल्ने र धेरै बोल्ने स्वभावका हुन्छन् ।
पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको लागि उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । हाम्रो जस्तो अनुशासनले बाधिएको पूर्विय समाजमा महिला चाहेर पनि त्यति खुल्न सक्दैनन तसर्थ पनि महिलाले यौनिक चाहना शब्दमा ब्यक्त गर्न नसकेका हुन । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ ।
४. अनुहार रातो हुनु वा शरीरको तापक्रम बढ्नु
५. अंगालोमा भएको बेला कम्मर वा अन्यत्र हात राखे
यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ुकस्तो नरम ओच्छ्यानु वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।